सामसुङलाई ६ अर्ब ६० करोड डलरको फाइभ–जी नेटवर्क ठेक्का
मङ्गलबार, २३ भदौ, २०७७, दिउँसोको १२:२४ बजे
लकडाउनमा ६ अर्ब १४ करोडको निकासी
विराटनगर । संघीय सरकारले जारी गरेको १ सय २१ दिने लकडाउन अवधिमा विराटनगर भन्सारबाट ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारत निकासी भएको छ । कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि साउन
बि.के.एम. मसलाको बदमासी : ४५० पर्ने मसला १२ सयमा विक्री
विराटनगर । विराटनगर– १० स्थित बि.के.एम. मसला उद्योगले अत्याधिक मुनाफा राखेर उत्पादन बेच्ने गरेको पाइएको छ । प्रतिकेजी ४ सय ५२ रुपैयाँमा पाइने मसला १ हजार २०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । लागत मूल्यभन्दा तीनगुणा बढीमा
विराटनगर । अविरल वर्षाका कारण माछा पालेको पोखरी भरिएन थालेका छन् । विराटनगरको हाटखोला स्थित फन एण्ड फुड भिलेज रिसोर्ट नजिकैको पोखरी भरिएर पानी बस्तिमा बग्दा पोखरीको माछासमेत बगेको छ । पोखरीबाट माछा बगेपछि बिहीबार र शुक्रबार दिनभर सयौं स्थानीयले